>ခရမ်းရောင်လွင်ပြင် | ချမ်းလင်းနေ
Filed under: ရုပ်ရှင် — 21 Comments
သူလဲ ကျွန်တော်အတွက်နဲ့ အတော်ကို အလုပ်ရှုပ်သွားပါတယ်။မှာတဲ့ကားတွေ အားလုံးက ကားအဟောင်းတွေ။ကျွန်တော်မှာတဲ့အထဲက Wuthering Heights တစ်ကားထဲရပြီး ဒီကားကြတော့ ဝယ်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီကားက ဗမာပြည်မှာတောင်ရိုက်ခွင့်မရပဲ သီရီလင်္ကာမှာ(“Bridge on the River Kwai”ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့နေရာမှာပါ။) သွားရိုက်ရတယ်။ဒါရိုက်တာRobert Parrishက အဲဒီအချိန်တုန်းက နာမည်ကြီးနေကြတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေကို တောင်မသုံးပဲ။မင်းသမီးအသစ်ရွေးဖို့ မြန်မာပြည်လာပြီး ဒီကားအတွက် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအသစ်ရွေးပွဲ ကျင်းပပါတယ်။
>ရှေးဟောင်းကားလေးတစ်ကားပဲ အချိန်ရရင် တစ်ကားလုံးကြည့်လိုက်ဦးမယ် အခုလို ကြိုးစားပြီး ရှာဖွေစုဆောင်းပေးထားတာတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံးကြည့်သင့်တဲ့ ကားဟောင်းလေးပါ။
>လင့်လေးတွေ ဖော်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ အကိုချမ်းလင်းနေရေအဲ့ဒီကားလေး ကြည့်ချင်တာ အစအဆုံး ရှာမတွေ့လို့တကယ့် ကျေးဇူးပါပဲ
>အရင်က ကိုညီလင်းဆက် ဖော်ပြထားတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်
>ကျွန်တော်ကတော့ ကို ချမ်း ဆီကနေကြည့်ပြီးပြီ..တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်….
>ကြည့်ချင်လိုက်တာကောင်းမယ့်ပုံပဲနော်Wuthering Heights ကငယ်ငယ်တန်းကတီဗီမှာလာတာကြည့်ရတယ်မေ့သွားပြီဘယ်ကနေပြန်ကြည့်ရမလဲမသိဘူးသိရင်ပြောပြပေးပါဦး..နော်
>ဒါက မူလအစ Wuthering Heights ကားပါ။ U tube ထဲကနေ ကြည့်လို့ရအောင်ပါ။http://www.youtube.com/watch?v=9BTdQ3eomP8ဒါလဲ နောက်ပိုင်းပြန်ရိုက်ထားတာပါ။http://www.youtube.com/watch?v=U5GBxmVvbE0
>ကျေးဇူးဘဲ အစ်ကိုရေ အဲဒီကားအကြောင်းကိုစာတော.ဖတ်ဘူးတယ် ကြည်.တော.မကြည်.ဘူးဖူးအစ်ကိုရရှင်းပြ ပေးထားတာရော ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရော တင်ပေးတဲ.အတွက်ပါ ကျေးဇူး အစ်ကိုရေ …
>ကိုချမ်းရေ အခုလို မျှဝေထားတာ ကျေးဇူးပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို ကြားပဲကြားဖူးတာ မကြည့်ဖူးဘူး။ အခုတော့ ကျေးဇူးနော့။ ပိတ်ရက်မှ လာကြည့်မယ်။
>မပြန်ခင်ကြည့်သွားဦးမယ်။ ကျေးဇူးပါ ဘကြီးချမ်းရေ…
>ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်မှာပါ.. ဝေငှတဲ့အတွက် ကျေးဇူး..
>Wuthering Heights link အတွက်လည်း ထပ်ကျေးဇူးတင်၏
>ကိုယ့် ညီရေ…. ခင်မင်စွာနဲ့ ပဲရင်းရင်းနှီးနှီးခေါ်လိုက်တယ်နော်… သီတင်းကျွတ်လပြည့် နေမှာပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှု အပေါင်းနဲ့ ပြည့် စုံပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါ တယ်… အခွင့် ရယင်တော့လေထန်ကုန်း ဇတ်ကားလေး ကူးချင်ပါတယ်… ကိုယ် အရူးအမူးစွဲလန်းခဲ့ ရတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားပေါ့ ….
>အဲကား သိတာတော့ကြာဘီ။ ကြိုကြားကြိုကြားကြည့်ဖူးတယ်။ အဲအမျိုးသမီးက အင်္ဂလိပ်စာတော်တော်ကောင်းတဲ့ အပြင် ကျက်သရေရှိတဲ့ မျက်နှာနဲ့။အစအဆုံးမကြည့်ဖူးပါ။း)
>ကျေးဇူးပါဗျာ…. သိတောင် မသိဘူး.. အခုလိုဖော်ပြပေးတာ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
>ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်ဗျာ .. ဒီနေ့ ဒီကိုရောက်လာရတာ တန်သွားပြီ …
>အဲဒီမင်းသမီးကြီးအကြောင်းကို ကြားဖူးတယ်…မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကိုချမ်းရေ…းဝ)
>မကြည့်ရသေးဘူး..နောက်ရက်မှ လာကြည့်မယ်ချစ်ကိုကြီးရေ..
>အမကရုပ်ရှင်သိပ်ကြိုက်တာ ဒီလိုဂန္ဓ၀င်ဖြစ်တဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးကို သိမ်းထားချင်ပါတယ်…အရမ်းလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်..ဒါပေမယ့် utube က ဒီမှာကြည့်လို့ရဘူး…ခင်မင်စွာဖြင့်မိုးငွေ့
« >Nine In The Nine